I-China iFibre Optical Cable abavelisi kunye nabaXhasi- i-Chaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeFiber Optic > Ifayibha Optical Cable
I-Fiber Optical Cable eyenziwe e-China ingathengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Imodeli eyodwa-yeFibre yangaphakathi yeCable
Le Modeli yodwa yohlobo olunye lweFayibha yangaphakathi isetyenziswa ngokubanzi kumaziko edatha, kwiipaki zeofisi nakwizakhiwo zale mihla, kwisicelo senethiwekhi esikhawulezayo.
Ilahlekileyo Tube Metallictype LAP esingxotyeni salo
I-Tube elahliweyo ye-Metallictype LAP Sheath: Le tyhubhu ikhutshiweyo ingasebenziyo ikhebula yefayibha isetyenziswa kakhulu kumaziko edatha, kwiipaki zeofisi nakwizakhiwo zale mihla, kwisicelo senethiwekhi esikhawulezayo.
I-Tube elahlekileyo YONKE-i-Dielectric Type PE Sheath
I-Tube elahlekileyo YONKE-i-Dielectric Type PE Sheath: Le tyhubhu ikhutshiweyo ingafakwanga izixhobo zentsimbi (amandla angengowesinyithi) isetyenziswa kakhulu kumaziko edatha, kwiipaki zeofisi nakwizakhiwo zale mihla, kusetyenziso lwesantya esiphezulu senethiwekhi.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ifayibha Optical Cable abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ifayibha Optical Cable eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.